Facebook na-egbochi ọtụtụ saịtị mgbasa ozi ndị ọzọ dị ka Infowars na ndị ọzọ: a kpọkwara saịtị a: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 3 Ka 2019	• 16 Comments
Facebook bans taa ọtụtụ ebe mgbasa ozi ọzọ dị ka Infowars, Farrakhan na ndị ọzọ. Ọ na-aga n'ihu n'ihu: ọ bụrụ na i bipụtara isiokwu sitere na saịtị ndị ahụ na usoro iheomume gị, ị ga-enwetakwa mmachibido iwu. Nakwa na Page nke Martin Vrijland enwere ozi maka ọtụtụ ụbọchị na 2 ga-eme ụdị ntọala niile na May. Na fim isiokwu a na (na n'okpuru na na nzaghachi) M na-egosi otu m si eme ọtụtụ mgbalị ịnye data achọrọ n'aka Facebook (ọ bụ ezie na achọtara m ihe ndị ahụ achọrọ), ma bọtịnụ aha ntọala anaghị arụ ọrụ.
M na-ekwu maka ọtụtụ afọ na ebe nrụọrụ weebụ dị ka Infowars na-achịkwa mmegide. Ebuola ulo oru a n'ezie ma jiri ya weputa ndi mmadu na-eto eto nke ndi n'eche echiche. Akpa, ị ga-enwerịrị ike ijide ha na stampụ doro anya ma debe ha n'akụkụ aka nri. Eziokwu ahụ bụ na Facebook ugbu a na-egosipụta mmegbu a siri ike na igbochi peeji nke pụtara na njedebe nnwere onwe ikwu okwu bụ eziokwu. Ebe nrụọrụ weebụ ndị a nwere ike ugbu a na-ahụ ihe otiti ahụ ma na-akatọ egwuregwu ahụ n'ụzọ a na-achịkwa. Site na 1 ụbọchị, ndị ọchịchị na-achịkwa ikike niile na ịntanetị.
Ndọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mgbasa ozi na-emegharị anya na ị nwere ike ịkọwa ọha mmadụ na ngalaba. Ichọrọ n'ezie ịchọrọ ịkwado ụmụ amaala ọ bụla ka ha chee ụzọ iche echiche ma jikọta ya na omume ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ị na-eji usoro mgbasa ozi na-eduzi nghọta ma na-enye ndị mmadụ ihe ngosi a na agba. Ọ bụrụ na ị kwusiri ike na ọ dị mma na ị nwere otu uto ma ọ bụ agba, ị nwere ike ịnweta ndị mmadụ ịme ntuli aka. Mgbe ahụ, ị ​​ga-akọwa kpọmkwem otú njikwa nlekọta anya gị si arụ ọrụ na otú i si nwee ihe ịga nke ọma n'ịzụ atụrụ ka ụmụ nwoke, b ma ọ bụ c. Ihe niile gbasara ya jigide ihe ndi mmadu huru. Ọ bụ otú a ka a kpọrọ ya: njikwa echiche. Otú ọ dị, ị ghaghị inye pallet niile. N'ezie, ị ga-ahọrọ ịhụ na ị nwere ike ịme ka onye ọ bụla n'otu n'otu na otu echiche ahụ, ma mmadụ psyche na-arụ ọrụ dị iche iche. Onye na-amasị ịkwọ ụgbọala Mercedes, nke ọzọ Volkswagen ma ọ bụ BMW. Ịchọrọ ịnwe ike ijide echiche dị iche iche na ọkacha mma zipụ ha. Ndị na-adọta ụdọ n'elu ụwa (site na netwọk ha nke òtù nzuzo dị ka oge dị iche iche, ụdị mahadum dị iche iche na-etolite nzukọ maka ìgwè a) na òtù ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke okpukpe, maara nke ọma karịa onye ọ bụla na ị na-eme ka mmegide ahụ na-aga n'ihu mgbe niile ị ghaghị ijide.
Echiche ndị mmadụ nwere ike ịkọ dị ka agba na ihe ọkụkụ. Ịchọrọ inwe ike itinye ndị mmadụ na edemede dị ka o kwere mee, ka i wee nwee ike ijikọta àgwà ụfọdụ ma ọ bụ omume nke ndị mgbasaozi na-emepụta na ìgwè ahụ. "I kwesiri, n'ihi na i nwere nke ahụ na nke ahụ" A na-agbanwezi gị, gbanwee ma ọ bụ Katọlik, ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'oge a na-arụ ọrụ ntanetụ na ọ bụ mgbasa ozi nke na-eme ka onyinyo ahụ dị. Ọchịchị bụ ụka ọhụrụ. Na ị ga-eso na otu ụka, ma ọ bụghị ị gụọ. Dị nnọọ ka ị ga-adị maka Ajax, PSV, ma ọ bụ Feyenoord. Ya mere ị na-ekpe, aka nri, na-emesapụ aka, na-elekọta mmadụ na ndị ọzọ. Nke a bụ otu ị ga-esi jikọta ndị mmadụ na 'ụdị': akara. Enwere ihe nchekwa maka echiche ọ bụla n'ime ọha mmadụ. Nnyocha nnukwu data nke netwọk internet, mkparịta ụka n'ịntanetị, ozi e-mail, mkparịta ụka telivishọn, ọrụ mgbasa ozi na ndenye ọ bụla nke data ọnọdụ (ihe ị na-adabere na onye ị na-emeso) nye ọrụ nzuzo ahụ nke ọma nghọta onye chere adheres. N'ezie nke ahụ anaghị eme n'egbughị oge na n'ihi na ị nwere ike imebi ihe ị na-eme George van Houts onye mere ka akụkọ ahụ daa n'ụzọ a na-achịkwa.
Ọrụ nke ndị ọrụ nchekwa nchekwa bụ enye gị mmetụta na a ga-eme ndokwa maka gị ma jide gị n'ime ụgbụ azụ. Otú ọ dị, a ga-ekwe ka ọtụtụ ndị na-agbanye ike, na-eme ka ha nwee ike ịkụgharị ụfọdụ na ụkwụ ụkwụ nke ike, mana ha anaghị efu ya kpamkpam. A ghaghị ịchọta ihe ọhụụ banyere ịme ihe nyocha Facebook na ihe ijuanya nwere ike ịda na ya site na ebe nrụọrụ weebụ nke ọfụma mmegide a na-achịkwa. Ọ bụ mgbe nile ka ebumnuche na mmadụ nkịtị n'okporo ámá na-agafe. Ọ na-agba iko kọfị ma na-eche na ndị ọzọ ga-ahazi ya. Infowars 'Alex Jones ma ọ bụ Robert Jensen ga-adị mma maka gị na onye ọ bụla na-anọgide na-agafe ebe ọ naghị eme ihe ọ bụla.
Mgbasa mgbasa ozi na mgbasa ozi ọzọ na-achọ ịduzi nghọta ndị na-eso ụzọ na ịmepụta ihe na-esote na ya. N'ọtụtụ, a ghaghị ịgba gị ume isonye na nguzogide a na-achịkwa, dị ka nke edo edo edo edo. Nke ahụ bụ maka ndị na-ahụkarị nsogbu. Mgbe ahụ, ha nwere ike igosi obi nkoropụ ha. Ka ọ dị ugbu a, ọdịda nke ọchịchị aka ike na-agba ọsọ ọsọ.
N'ezie, ị nwere ike ikweta na Facebook bụ ihe ịga nke ọma nke otu onye nwere ọgụgụ isi aha ya bụ Mark Zückerberg, bụ onye mara mma iji guzobe saịtị mgbasa ozi. Oge eruola ka ị na-akụ ndị akụkọ 'American Dream' ahụ. Ndị dị otú ahụ na n'ihu ndị ikom amalitela na ndị ike. Site na ụbọchị 1 Facebook ka esetịpụrụ dịka ngwá ọrụ nledo, nghọta na-emetụta ngwá ọrụ na ụzọ ntinye na usoro ịchịkwa aka. Ọ bụ usoro nzọụkwụ site na nkwụsị na njedebe ikpeazụ na-aghọwanye nke doro anya nye ndị ka ka nwere mmụọ edemede.
Ihe ngosi nke Facebook ketara data ya na Cambridge Analytica bụ naanị ihe mkpuchi iji nye echiche na nke a bụ ihe omume pụrụ iche. Mgbe ahụ, Facebook nwere onye nlekọta iji mee ka ị bịanye aka na ya maka mmejọ nzuzo ọzọ, n'ihi na ọ bụrụ na ị gaghị enwe ike iji ọrụ ụfọdụ. A na-ewepụ anya nlezianya nke nledo ndị ahụ gbakwasịrị ụkwụ na ya site na ihe nkiri Cambridge Analytica gara aga, dị ka ọkụ ọkụ nke ụgbọ elu na-agbapụ ọkụ na-achọ ọkụ. Facebook bụ otu ahụ e guzobebere na maka ìgwè nke na-edu ụwa ka ọ bụrụ obodo ndị uwe ojii. Nchikota nke ndi mmadu site na ijikọta ndi mmadu na otu ndi a machibido na Facebook mere ya bu ihe ndi ozo n'igosi ndi mmadu.
Ya mere, ndi mmadu ndi di oke nkpa nwere ike ighota ha mgbe nile. "Oh, ị bụ otu n'ime ndị si Infowars, Jensen ma ọ bụ Forum voor Democracy. Oh, ị bụ otu n'ime ndị a machibidoro na Facebook."N'ụzọ dị otú a, a na-ejikọta ndị na-anaghị achịkwa na ìgwè a na-achịkwa.
A na-egwuri egwu egwuregwu dị egwu. Ọ bụghị maka ihe ọ bụla na ndị ọchịchị nke ụwa a nwere ike ịnweta ndị na-enweghị ike ịlụ ọgụ nke nwere ike ịkụ egwu egwuregwu kacha mma ma ọ bụ egwuregwu Go n'ụwa. Ha maara otú e si eme nke a n'ụzọ dị mkpa na ha na-etinye onye ọ bụla n'ọnọdụ na-agafe agafe, nwere ike ịme nhụsianya na ha maara otú e si eme ka ha bụrụ ndị na-enweghị isi ma jikọta ha na otu ha na-achịkwa. N'ikpeazụ, ụgbọ mmiri nchekwa nke ìgwè ahụ na-achịkwa ga-adaba site na ijikọta ya na nke ụma wuru-na nkwarụ ma ọ bụ ọgba aghara ọha na eze na ọgba aghara akụ na ụba. Gụnyere na isiokwu a (na ọtụtụ ndị ọzọ) m kọwaa otú m si eche na egwuregwu ahụ na-arụ ọrụ kpọmkwem.
Ị na-ele ya anya, wụba ya na iko kọfị ọzọ ma mee ka ubu gị kpuchie gị n'ihi na ị pụghị ịgbanwe ihe ọ bụla banyere ya. Ndụ gị ga-aga n'ihu. N'uche m, nke ahụ abụghị àgwà ziri ezi. Ọ bụrụ na ị hụ na a na-ewu ụlọ mkpọrọ gburugburu ebe ị na-egwuri egwu nakwa na i nweghị ihe ọ bụla iji kwụsị ndị na-ewu ụlọ, ọ bụ ọrụ gị. Ị nwere ike ịmalite mgbanwe n'onwe gị. A mgbanwe nke ga-eweta ezigbo mgbanwe. Ọ bụghị otu n'ime akwa edo edo ma ọ bụ ọkọlọtọ na ihe ngosi megide ọchịchị. Mba, mgbanwe nke na-amalite site n'iche dị iche na ndụ ma nwee ike ime mgbanwe dị ezigbo mkpa. Nke ahụ na-amalite site ngbanwe nke nkwenkwe na 'mgbanwe ahụ si n'elu"ka"mgbanwe m si n'aka m". Ezi mgbanwe na-amalite site n'ikwere na mmetụta dị ike nke mkpụrụ obi gị na omume gị (arụpụtara) na ụwa a. Kpọọ ya 'nru ububa' ma ọ bụ kpọọ ya 'ịdaba na efere na-egbuke egbuke', ọdịiche dị na ike dị n'ime onwe gị. Anyị na-ekwere na ya mmetụta nke uche anyị furu efu. Anyị echefuola onye anyị nọ na mkpụrụ obi anyị ma chefuola mmetụta dị ike onye ọ bụla nwere ike inwe na gburugburu ebe obibi ya. Nke ahụ na-amalite site na mkpebi siri ike ga-eme.
Ozugbo anyị hụrụ na mkpụrụ obi bụ ihe na-eme ka nhọrọ anyị na omume anyị niile pụta, mgbe ahụ, anyị na-amalite ige ntị na mkpụrụ obi ahụ ma na-erughị 'ihe dị mma ma jide'. Anyị na-aga ime nhọrọ dị ike; na-ekwe ka ịhapụ ihe ụfọdụ dị nkenke ma kweta ịtụkwasị obi na mgbanwe ndị a nwere ike ime.
Nnukwu mgbanwe adịghị abịa site na n'elu, ma ọ bụ nhazi (ịchịkwa), ma ọ bụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ mmegide emegide ma ọ bụ mgbasa ozi mgbasa ozi ọhụrụ. Nnukwu mgbanwe na-amalite na gị. Nke ahụ na-amalite site na nhọrọ ị ga-eme site ugbu a gawa. Ọ na-amalite site n'ige obi gị ntị; ọnu-uzọ-ama na nkpuru-obi-gi. Ònye nọ n'ọṅụ nke ndụ gị? Nke a ọ bụ gị onwe gị ma ọ bụ nke ahụ (site na njide akara nke egwu na ọnwụ nke ụfọdụ) gị akụ, onyeisi, òtù ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọrụ gị ma ọ bụ ihe ọ bụla? O nwere ike ị gaghị ekwenye na nhọrọ gị nwere mmetụta ọ bụla n'ụwa, n'ihi na steam locomotive na-agba ọsọ! Kedu ihe mere i ji eche na a na-emepụta ọtụtụ mmadụ site na nwata ruo n'ili iji nọgide na-arụ ọrụ ma na-ekere òkè na usoro ahụ? Ọ bụ oge maka mgbanwe site na mkpụrụ obi gị. Nke ahụ na-amalite site na nhọrọ gị. Ọ na-amalite site n'ige ntị n'obi gị na akọnuche gị. Gbanyụọ TV gị, gbanyụọ niile isi mmalite akụkọ ma gbalịa ịkwụsị onwe gị site na mmemme nke na-ebute gị kwa ụbọchị, ka ị wee nụ ụda olu gị ọzọ. Olu ahụ dị n'ime ya abụghị n'ezie mmiri mmiri nke okwu na-agwa gị okwu. Ọ bụ mkpụrụ obi gị na-eme ka ị mee nhọrọ dị ọcha ma dị njọ; nke ahụ na-egosi gị na ihe ụfọdụ doro anya nakwa na inwe obi ike na-eme ka ị dịkwuo ike. Mkpụrụ obi gị na-egosi gị nke ahụ mgbanwe gị nke nnukwu mmetụta na usoro na edemede.
Mgbanwe ndị dị na ụwa a agaghị abịa ma ọ bụrụ na ị nọgide na-agafe agafe ma daa azụ. Mgbanwe ahụ agaghị abịa ma ọ bụrụ na ị jupụta otu nchịkọta otu ugboro n'ime afọ anọ ọ bụla ma nwee olileanya na ike ọzọ ga-enyere gị aka n'oge a. Kedu ka ị ga-esi mee ka ị kpuo ìsì? Nke ahụ bụ n'ezie ụdị umengwụ. Mgbanwe ahụ ga-abịa mgbe ị na-eme ihe n'onwe gị. Enweghị echiche, ọ dịghị okwu, ọ bụ naanị omume. Ya mere, mee ka mgbanwe gbanwee ihe niile ị na-ahụ dịka ịkwado usoro aka ochie ma ọ bụ usoro nke usoro ahụ. Emela ya ọzọ. Gaa mee ya n'ụzọ dị iche. Ị nwere ike iche echiche banyere onwe gị, n'ihi na m na-eme nke ahụ nakwa na abụ m ihe ọ bụla karịa mmadụ nkịtị n'okporo ámá bụ onye kwụsịrị 7 afọ gara aga wee mee ihe dị mma. Mee ya!
Ihe ndekọ njikọ njikọ: rt.com
Nwepụta na nchekwube!
Kedu ihe ndị ị ga-esi kwuo na Julian Assange Wikileaks bụ PsyOp?
Paul Jansen nchịkọta akụkọ-na-isi Telegraaf: onye ọchịchị aka ike gị nke na-atụgharị egwu iwu TBS?
Tags: Alex, machibido, ime nnyocha, Facebook, facebook peeji nke, agba, ihe eji eme ihe, Jones, ugbua, peeji nke, wepụrụ, wepu
3 May 2019 na 13: 52
Iji mee ka Infowars kwadoro ya, wdg, ha ga 'ghachi' saịtị ndị ahụ. Nke a na-achota na Jones na co nwere ike rere dịka 'ndị e merụrụ' nke 'nkwụsị' ahụ mgbe a na-achịkwa Infowars, wdg, na-emegide mmegide. Jones ga-adịrị mma, ọ bụ Hen na site na ọkàiwu Hen na ọ ga-adị mma ọzọ Jones na ndị ọzọ bụ ndị nkedo rat na ndị 'America' na-anọgide na-ada maka ya, dịka Trump na-anọgide na-ewu ewu site na iduzi 'bashen'. Dị ka mgbe niile, ha bụ usoro ebighi ebi nke Hen.
Enweghị ihe ọ bụla dere, sị:
3 May 2019 na 14: 54
Ị nwere ike ịchọrọ ịgbanwe ihe ịchọrọ, ma ọ bụrụ na ị kwụsịrị n'ime ọha mmadụ niile na-emetụta ụbụrụ ndị mmadụ gburugburu gị, ị gaghị agbanwe nke a ma ọ bụrụ na ị na-eme mgbalị mgbe nile, ị ga-enwe iro na nzuzu mmeghachi omume.
M kwenyere na ọ nọworị ugbu a, ndị mmadụ nwere ohere ịmeta site n'ịmụ ọtụtụ ihe mebiri na 9 / 11. Ma eleghị anya ọ bụ 2 maka 12 .... anyị agafeela n'oge nri abalị ma ndị mmadụ ga-enweta ihe ha chere na m kwesịrị, ọ dịkarịa ala ndị na-anụ ụra ndị na-ekiri NOS maka ozi ọma ma jupụta oge ndụ ha na oge ọma, oge ọjọọ ma echefula football! ha maara ihe niile banyere ya ... ma ha eribeghị cheese banyere ụwa ha bi na psychopaths na-eduzi ụwa ahụ.
Enwere m atụmatụ ịhapụ Illuminati-Holland na oge, tupu agha Europe amalite, anyị ga-egbu ndị na-ekpe okpukpe udo, ma olee ebe ọ ga-adị mma ??
O doro anya na ọ dịghị ebe n'ụwa ebe ụmụ Rothchild na-ahapụ ndị mmadụ naanị, m na-ahụ ụbọchị ikpeazụ m na-abịa, na-agba ọsọ agha na nhụsianya, anyị na-akwụkwa ndị ahụ na-arịa cancer-ndị nzuzu gburugburu anyị ụgwọ ya ndị kacha, ndị ọkachamara ma ọ bụ ụmụ amaala ibe m? hmm ...
4 May 2019 na 07: 10
Enweghị ihe ọ bụla, n'ihi na m na-edeghachi m mmeghachi omume ọzọ site na 1 na Mee, ọ dịkarịa ala mmalite ma ọ bụrụ na mmadụ nile ga-eme ihe ndị a, kekọrịta ya na ọtụtụ mmadụ dịka o kwere mee.
N'okwu m ndị dị mfe, achọrọ m ịnye ozi.
Ruo ọtụtụ narị afọ, ndị mmadụ na-achịkwa ụwa bụ ndị kpebiri na ha chọrọ ịbụ ndị na-elekọta, na-achọ inwe ike n'elu ndị mmadụ, na-amanye ndị mmadụ ime ihe ha chọrọ.
Ọnụ ọgụgụ nke ndị nwere ike na-ebi n'ụwa nile ruo ọtụtụ narị afọ, ha na-ebi egwu, na-atụ egwu ịbụ ndị a na-ata ahụhụ, na-ekpochi, na-ekpochi.
Ndị mmadụ, ndị mmadụ, apụghị ịbụ ndị ha chọrọ ịbụ, ha enweghị onwe ha, ha aghaghịkwa irubere iwu na iwu dị iche iche (nzuzu na iwu dị iche iche) nke na-egbochi gị n'ihe niile ị ga - achọ ná ndụ.
Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla na-arụ ọrụ, na mpaghara ọ bụla, ma n'ezie ndị mmadụ gburugburu ụwa, ga-etinye ọrụ ha 1 ụbọchị, lee ihe mere, 1 ụbọchị, ihe bụ 1 ụbọchị ogologo ndụ.
Ka anyị ghara ichere, Monday 3 June 2019 bụ nnukwu ụbọchị iji mee nke ahụ.
Wepụ uwe gị, gbanyụọ kọmputa gị, mechie ụlọ ahịa gị, kpọọ ya, ma mee ya.
Ndị ọrụ ugbo na ndị ọrụ ugbo, ị nwere nnukwu ọrụ na nke a n'ihi na na-enweghị ihe nchekwa gị na-echekwa na ụlọ nkwakọba ihe, ọ dịghị nri ọ bụla dị na ya, mana ụbọchị 1 nwere ike ịnọ na nlekọta.
Ma ọ bụrụ na nke ahụ ezughị, anyị ga-eme ya ọzọ ma eleghị anya ọzọ.
Ndị ike anaghị anọchite anya ihe ọ bụla, ha na-adabere na ndị ha chọrọ ịchịkwa, ha chọrọ anyị na ha na-eme ike ha maka nke ahụ ruo ọtụtụ narị afọ.
Anyị niile bụ ndị nweere onwe anyị ma anyị agaghị anakwere ya.
Adịghị m na Social Media onwe m, mana ọtụtụ ndị ọzọ bụ ndị m na-enwe olileanya na ha chọrọ ịkekọrịta ozi a dị ka o kwere mee.
Anyị ụmụ mmadụ nwere ike ime ihe banyere ya, mee ka ụjọ gị pụọ ma mee ya.
3 May 2019 na 15: 46
"Anyị ji ụgwọ ndị ahụ niile ... (ndị ...) ndị nzuzu gbara anyị gburugburu, ya mere, ònye ka m na-akpọ asị, ndị okenye ma ọ bụ ụmụ amaala m? hmm ... "
Ị na-enye ihe ngosi dị mma nke otu esi arụ ọrụ usoro ahụ. Ugbua, o nweela ihe ịga nke ọma n'ịmepụta polarity site na mkpasu iwe.
Ihe kachasị mma maka m bụ ịnwa ịnọnyere onwe m n'ọnọdụ ọ bụla ma si otú ahụ na-egbochi njakịrị niile dị m gburugburu. Ọbụrụna otu onye na-esetịpụ ihe nlereanya na ya, mgbe ahụ, enyere m aka ịgbanwe.
3 May 2019 na 16: 47
Ị nwere ike inye ihe atụ nke ihe a? Kedu ka ị si mara na onye ọzọ ahụ ewerewo gị dị ka ihe atụ? Kedu ka nnukwu mgbanwe ahụ si dị, gịnị bụ mgbanwe ahụ na okwu doro anya.
Enwere m afọ ndụ ugbu a na enweghi m ike ime ihe ọ bụla.
4 May 2019 na 18: 27
Nke a nwere ike ịbụ nkụda mmụọ mgbe ụfọdụ, anaghị m ama ihe ọ na-emere ndị ọzọ. Ana m agbalị ibi ndụ m n'ụzọ na-adịrị m mma. Na-emeso ndị ọzọ ihe m ga-achọ ka a gwọọ m, nọrọ na mụ onwe m mgbe onye ọ bụla nọ m gburugburu yiri ka ọ na-aga ime nzuzu, chọọ nghọta karịa ịkpọasị.
N'ụzọ dị mwute, ụdị okpukpe nile na ọnọdụ dị iche iche ejiriwo okwu ndị dị otú ahụ dị mkpa. Iso Ụzọ Kraịst, Ọgbọ Ọhụrụ, ọ bụ okpukpe, ihe gbasara sayensị, agbaghala ihe niile dị ndụ.
Nke a na-eme kpọmkwem ihe Martin na-akọwa ebe a. Enwere ike ịme onye ọ bụla ozugbo, enwere ike ịmepụta polarity na mberede, abụ m afọ ọhụrụ.
Naanị otu ọnwa gara aga, dịka otu enyi m si kwuo, m bụ onye na-akwado Forum van Democracy. N'ehihie a n'ememe mkparịta ụka na Katọlik okpukpe siri ike bụ ndị hụrụ nrịbama sitere n'Amagedọn n'ebe nile, m bụ onye si n'ezi ofufe dapụ, m ga-ere ọkụ ruo mgbe ebighị ebi n'ọkụ ala mmụọ.
Ọ bụrụ na mụ anọghị onwe m, echere m na m ga-enwe nnukwu nsogbu njirimara
Ọ dị mma na m na-enweta ụfọdụ nzaghachi mgbe ụfọdụ na-egosi na enweghị m nzuzu: https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/landelijke-peiling-vertrouwen-in-de-media-wat-laat-dat-zien/#comment-23048
3 May 2019 na 16: 39
Ee, ọ dị mwute kama ebe ndị ohu ahụ nabatara iwu na iwu nke onye 'ọlite' nke ndị njem. Ndị ohu amaghị na echiche ha nwere na isi ha abụghị echiche nke aka ha, kama ha na-esonye ya dị ka sponge maka onye ahụ na-ebuso ndị ọbịa. Ma n'ezie, ọ bụ ndị ohu na-elekọta usoro Hen ma chebe ndị iro ha 'Masters', na aka ha na ezé. N'ịgbagharị na telivishọn, onternet arụchaala ọrụ ha. Na mgbakwunye, obere iq nke ndị ohu na
egoism, autism, egwu na obi amamikpe na-emetụta ma volaila nrọ nrọ nke Hen na emezu. Ndị ọkachamara banyere ndị ohu na ndị ohu anaghị ama ya. Ka ha bụrụ ndị ohu na-ekwu Ha.
3 May 2019 na 19: 38
Idd anyị na-ekwughachi ebe a na saịtị ahụ, Ọbụna Bernays na Goebbels nọ na-ele atụrụ ndị na-eme ntụrụndụ nwere ọnụ na-emeghe ... nke ọma gịnị ka ịchọrọ ma ọ bụrụ na usoro ahụ dị mma-na-ege ntị na millimita na nkwado afọ ofufo nke ndị ohu
Ọ bụ na ha adighi mma n'ọhịa ... a na - ekwu na ị pụghị ịkwaa atụrụ karịa ugboro abụọ ma ọ bụrụ na ha ahụbeghị na Madurodam 😀
"Ọ dịghị onye ọzọ bụ ohu na-enweghị atụ karịa ndị kwenyere na ha nwere onwe ha."
4 May 2019 na 10: 20
Ego na-anọchite anya ike anyị na-etinye ebe. Ọ bụrụ na ị kwenyeghi ihe, ị ghaghị ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ. Ịkwụsị nke mbụ na ihe ndị anyị nwere ike imetụta, dị ka akwụkwọ akụkọ, ịkwụsị ịzụrụ nnukwu ụdị na ịzụta dị ka o kwere omume na mpaghara maọbụ iwughachi onwe anyị ka mma. Ejila otu nnyefe ma gbalịa ịchọta ụlọ dị ọnụ ala na ìgwè dị ike.
Ọ bụ eziokwu na ọ bụrụ na anyị kwụsị ịkwụ ụtụ isi, nke a ga-enwe mmetụta. N'ụzọ dị mwute, ìgwè dị obere ma otu ụbọchị maọbụ ụbọchị abụọ enweghị uche na ogologo oge.
Anyị ka nwere ụzọ dị anya anyị ga-aga, ma site na nkwụsị, anyị na-alaghachi na isi. Ọ dị mma ichebara ya echiche tupu oge eruo n'ihi na ejiri m n'aka na anyị ga-emesị laghachi azụ.
Ụzọ ahụ nke ụwa weputara ugbu a bụ njedebe nwụrụ anwụ ma ghara ịga n'ihu ruo mgbe ebighị ebi. Ọ ka mma ma ọ bụrụ na anyị ahapụla onwe anyị tupu oge ahụ, mgbe ahụ, ịga ahụ agaghị esi ike.
4 May 2019 na 12: 11
Ọ bụghị naanị maka ego. Ọ bụ maka ndị òtù nke otu ndị dị n'elu iwu ahụ nakwa na ọ bụ otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ ka a na-emekarị ka e nwee iwu. Na na ndị a na-ejide aka nke aka ha karịa isi ha ma ọ bụrụ na ha mebie iwu ma ọ bụ ghara ime ya ka ị ghara ikpochapụ ha. Nke a na-emekwa ka ha nwee ohere ịsọ asọ karịa ndị ọzọ, ọnụ ọgụgụ nkịtị. Na ha na-enye ndị Hun nri oge niile ka ha wee nwee ike imebi usoro a, ọchịchị, na-atụle omume na iq nke ndị ohu. Tụkwasị na nke a, na ndụ kwa ụbọchị, ha maara ihe iji zochie ndị nkịtị na ha bụ akụkụ nke ndị 'na-esote' ndị ọbịa.
4 May 2019 na 13: 53
Ị ghọtara nkọwa nkọwa doro anya iji kọwaa ìgwè a, ha na-ejikwa dị iche iche, ka anyị kwuo masks Venetian (iyi egwu / echiche) iji nweta ihe mgbaru ọsọ ha ... kpọmkwem ihe JFK kọwara na okwu ya a ma ama nke 1961 ..
Ị ga-echeta, ànyị tọhapụrụ anyị, ọ pụghịkwa ịbụ obere ego?
ezi nkwekorita na-akpata nsogbu .... 😉
4 May 2019 na 20: 46
Ee e, ma ego bụ isi ngwaọrụ ha ji ejikwa ihe niile. Nke a bụ ihe mere na ha na-egbu onye na-eme atụmatụ itinye ego nke aka ha ma ọ bụ chọọ ịhapụ si ụlọ akụ etiti.
Ị chere na ndị agha / ikpe / TV na-arụ ọrụ maka ha n'efu?
N'ụzọ dị mwute, ha na-abụkarị ndị na-akpata ihe ngwọta ọhụrụ dị ka bitcoin ma ọ bụ na ha nwere ike weghachite oge ọzọ na ego ego ha.
4 May 2019 na 22: 32
ọ bụghị ọtụtụ ego ma ọ bụ ọtụtụ ihe, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke na-egosipụta njedebe njedebe, ya mere, nkwonkwo nkwonkwo, usoro mmeghe nke kpụpụtara site na (mahadum) mahadum iji weghachite ihe ndị kasị mma a na-eji eme ihe, usoro mmegharị, imebi ego, ịchọta ngwaọrụ / teknụzụ wdg
Nzọụkwụ ikpeazụ bụ iji mebie nguzogide ikpeazụ site na teknụzụ ịbanye n'ime ma ọ bụ mee ka ahụ mmadụ dị ọcha.
Onye nyocha dere, sị:
4 May 2019 na 16: 15
"Ọ bụghị n'efu ka ndị na-achị ụwa a na-enweta ndị na-enweghị isi na ndị nwere ike ịkụ egwu egwuregwu kacha mma ma ọ bụ ndị egwuregwu Go n'ụwa." Ònye na-elekọta ndị na-arụ ọrụ ike? Ònye na-enye mwepụ aka? Hụ ihe niile edere aha maka ọtụtụ afọ ebe a:
4 May 2019 na 17: 02
ọ bụghị naanị Adam na-ahụ ihe osise zuru ezu, ana m ekwu nke ọma n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ na-amalite ịmata nchịkwa ahụ na-eme ka ọ dịkwuo mma (exponentially) anyị nwere ike igbochi nke a na-eme ihe ọjọọ, + Mgbapụta site n'aka Sin, wepụ ma wepụ njedebe (Amagedọn). Ihe m maara Agha Ụwa nke Atọ na-aga n'ihu, hụ ebe ọkụ niile na-acha ọkụ ọkụ na ụmụ ahụhụ niile dị n'okpuru ìgwè a, ana m agwa gị na n'elu ha na-arụkọ ọrụ ọnụ ma gbanwee ihe niile iji mee ka ígwè a dị na steam. Nkebi nke M na II abụghị ihe na-adaba, ma ebumnuche bụ na ọtụtụ ndị anaghị achọ ... ọ dị mwute
Echere m na ihe ka n'ọnụ ọgụgụ ga-eteta n'oge na-agakwaghị ekwe ka etinye ha n'ụgbọala nke onye a na-akpọ elite / onye a họpụtara ahọpụta ....
N'ebe a, m nwekwara ike ịkwado ọrụ nke Christopher Jon Bjerknes na ọtụtụ akwụkwọ edepụtara site na Henry Makow ... nke a maara nke ọma Protocols + Red Symphony ọ dị mwute ikwu na usoro a nke luciferian
A machibidoro ajụjụ a maka ọnye Adam maka ihe kpatara ya, m ga-asị download enwere ọtụtụ ihe ọmụma a na - amaghị (amaghi).
4 May 2019 na 19: 13
Ọ dịghị ihe ọ bụla dị njọ na nke ahụ ma ọ bụrụ na ị na-elezi anya ugbu a, bụ ndị kwụrụ ụgwọ Count Coudenhove-Kalergi na Ụkpụrụ Nkụzi IDealism ma ghọta ihe mere ejiji dị ka Macron, Merkel, May (3M) na ọnọdụ dị mkpa iji nye akara ọnwụ ikpeazụ na mpaghara dum ịbanye n'ime ndị na-ahụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ma ọ bụ ọnọdụ Marxist mgbe ahụ ka gburugburu ahụ fọrọ nke nta ka o zuchaa
Na nke ahụ, China ka na-aga n'ihu ihe omume ahụ niile ma anyị enweghị ike ịghara ịnọ n'azụ
" Paul Jansen nchịkọta akụkọ-na-isi Telegraaf: onye ọchịchị aka ike gị nke na-atụgharị egwu iwu TBS?
Akaebe na ebe nrụọrụ weebụ mgbasa ozi ọzọ dị ukwuu na-emegide mmegide »
Nleta nile: 12.434.597
Kedu ihe bụ eziokwu banyere ogbugbu nke Derk Wiersum na gịnị ka nke ahụ pụtara nye 'onye akaebe ịgba okpu'?
Riffian op A ga - agha n'etiti US na Iran n'oge na - adịghị anya?
Martin Vrijland op A ga - agha n'etiti US na Iran n'oge na - adịghị anya?
chris-nwa op A ga - agha n'etiti US na Iran n'oge na - adịghị anya?
SandinG op Kedu ihe bụ eziokwu banyere ogbugbu nke Derk Wiersum na gịnị ka nke ahụ pụtara nye 'onye akaebe ịgba okpu'?